हट लाइनमा मेरो अनुभव !::Leading News Portal From Nepal.
कोरोना महामारी बिश्वमा फैलिए सगै नेपालमा पनि फैलियो। शुरुवाती अबस्थामा नै नेपाल सरकारले लकडाउनको आब्हान गर्यो ।जनतालाइ भाइरस फैलिनबाट जोगाउनको लागी । यस क्रममा सबै तहका सरकारहरु पनि महामारी बिरुद्ध सक्रिय भए कोरोनालाई परास्त गर्न, अझै पनि निरन्तर छन् । लगभग यि दुई महिनाको अवधिमा हामी जनता पनि स्वस्थ ब्यबहारमा निकै सचेत बन्यौ । यसका साथै प्रबिधि भित्रिएर सहज भएको छ भाइरस परिक्षण र निदानको लागी ।
यस महामारीमा ललितपुर महानगरपालिकाले सर्वसाधारणको सहजताको लागी हट लाइन सेवा सरु गर्यो र सो सेवाको लागी यो हट लाइन नम्वर उठाउने मलाई पनि अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा धन्यवाद दिन्छु । महानगरपालिकाको स्वास्थ्यकर्मी हामी सुरुका दिनहरुमा हट लाइन निकै सकस लाग्यो । निरन्तर कल आइरहँदा एकातिर घर, परिवारलाई डिस्र्टब र तनाव भइरहेको थियो भने अर्कोतर्फ विभिन्न जिज्ञाशा र समस्या समाधान गर्नु पर्ने जिम्मेवारी । लगभग एक हप्ता त बितेको पत्ता नै भएन सुचनाहरु संकलन गर्नु नै दिनचर्या बनेको थियो । लगडाउनमा समय बिताउन सबैलाइ गाह्रो भैरहेको बेला मलाइ त्यो अनुभव नै भएन । स्वास्थ्यकर्मी भएको हुनाले स्वास्थ्य संस्थाको ड्युटी, अन्य कार्यक्रम र हट लाइन मेरो एउटा नयां अनुभव ।
म फोनमा कम कुरा गर्न रुचाउने मान्छे फोन उठाउनु चुनौती बनेको थियो मेरो लागी तर दिनदिनै हटलाइनको माध्यमबाट धेरैजनाको समस्या समाधान गर्न पाउदा खुशी लाग्दो रहेछ, आत्मसन्तुष्टि मिल्दो रहेछ। सुरुका दिनहरुमा कोभिड–१९ सम्बन्धी, राहत सम्बन्धी, बिभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी, हस्पिटल सम्बन्धी, खोप सम्बन्धी, परिवार नियोजनका साधान सम्बन्धी, गर्भ पतन सेवा सम्बन्धी कलहरु आउथ्यो । वास्तबमै दुुःख परेकाहरु व्यक्ति त रुदै कल गर्नु हुन्थ्यो। यतिकै राहत लिन खोज्नेको पनि कमि थिएन जस्तो लाग्छ। ललितपुर महानगर अन्तरर्गत बिभिन्न ठाउमा । विपन्न, मजदुरको लागि कोइ पनि भोकै बस्न नपुरोस भन्ने उद्देश्यले खाना खाने ब्यबस्था गरिएको थियो। चामल र दाल जस्ता सामान माग्नेलाई आपत परेको होला भनेर खाना खान जानुस भन्दा रिसाएर, गाली गर्दै फोन काट्नेको संख्या धेरै हुन्थ्यो। अवास्तविक गरिब नै बढी थिए। निःशुल्क पाए मानौ बर्षभरीलाई अन्न जोहो गर्न चाहन्थे । लाग्छ राहत बाड्ने उचित समयनै नआइकन यो शुरु भएको छ।
रुने ,कराउने, घर पुर्याइदिनुस् भन्नेको संख्या पनि उस्तै । स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई घरबेटीबाट भएका हिंशा एकातिर भने यातायातको समस्या त झनै । पटक–पटक धेरै पटक कल गर्ने, जिस्क्याउने र टाइम पास गर्न फोन गर्ने जस्ता पनि कल आउछन्। हप्काउने, रिसाउने र हिरो हुनुपर्ने खोइ हाम्रो बाध्यता हो की बानी । सबैलाइ परामर्श गर्नुपर्ने जे जस्तो भएपनि । कसै–कसैले पुनः कल गरेर धन्यवाद भन्नु हुन्छ खुशी लाग्छ।
ललितपुर महानगरपालिकाले निःशुल्क संचालन गरेको एम्वुलेन्स विभिन्न दिर्घ रोगीहरु, गर्भवती, सुत्केरी, बिरामी बच्चा, डायलासिस गर्नु पर्ने ब्यत्तीहरुलाई समन्वय गरिदिन पाउदा निकै खुशी लाग्छ।
आजको दिनसम्म आइपुग्दा हटलाइनमा आउने फोनहरुको प्रकृतिमा फरक आएको छ। अहिलेको समस्या घरवेटीले घरमा पस्न नदिएको गुनासो, टेस्ट गरेर आउ । घरवेटीलाई पनि असुरक्षित बनाउने भए अब लकडाउनको अवज्ञा गर्नेले । काम सुरु गर्न लुकीछिपी आएको बताउछन् र विलाप गर्छन् । लकडाउन खुकुलो भएसंगै आएको समस्या हो यो । भाइरस एकदम फैलिने क्रममा भएको हुदा सबै ठाउहरु केही समयको लागी शिल गर्नै पर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
सेवानै धर्म हो । हामी जहाँ छौ जुन जुन ड्युटीमा छौ। सकेसम्म बचेर काम गरौँ। कोरोना भाइरस हो डराउनु पर्दैन, मर्नेको संख्या भन्दा निको हुनेको संख्यालाइ हेरेर मनोबल उच्च बनाऔ ।
घरमै बसौँ, सुरक्षित रहौँ, कोरोना नेगेटिभ रहौँ । धन्यवाद
(लेखक लोचना घिमिरे ललितपुर महानगरपालिका स्थित बुङमति स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)